यदि दाँतलाई माया गर्नुहुन्छ भने नगर्नुहोस् यी गल्ती – Khabaarpati
January 4, 2021 January 4, 2021 goodmamLeaveaComment on यदि दाँतलाई माया गर्नुहुन्छ भने नगर्नुहोस् यी गल्ती
काठमाडौँ । यदि दाँत नहुने हो भने तपाईको सौन्दर्य कहाँ रहन्छ ? सोच्नुहोस् त। अनुहारको शोभा हो, दाँत। दाँत खराब छ भने तपाई धक खोलेर बोल्न हच्किनुहुन्छ, हाँस्न त परै जावस्।भनिन्त, एक जीवन्त मुस्कुराहटले अनुहारलाई लाख गुणा सुन्दर बनाउँछ। तर, यसरी मुस्कुराउनका लागि तपाईलाई चाहिन्छ, सुन्दर, सफा र स्वच्छ दाँत। तर, हामी के भूल गरिरहेका हुन्छौं भने केवल केस र छालाको सौन्दर्यमा मात्र ध्यान दिने। दाँतको सौन्दर्यप्रति हामी न चर्चा गर्छौ, न चासो दिन्छौँ।गर्नुपर्ने चाहि के भने, दाँतलाई पनि नियमित रुपमा हेरचाह गर्नुपर्छ। यसको सौन्दर्य कायम राख्नका लागि सफाई र उपचारमा ध्यान दिनुपर्छ।हामी गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ, ब्रस गर्दा पनि। बिहान उठेर ब्रस गर्छौं। जबकी राती खाएको खाना दाँतमा सड्न थालिसकेको हुन्छ। राती र बिहानको खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नु राम्रो हो। यस्ता थुप्रै गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले हाम्रो दाँत खराब हुन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
१) पुरानो ब्रस प्रयोग-दाँत माझ्ने ब्रस लामो समय प्रयोग गरिरहनु हुँदैन। कम्तीमा पनि तीन महिनामा नयाँ ब्रस बदल्नुपर्छ।२) लामो समय ब्रस गर्ने-ब्रस गर्नु राम्रो हो तर, हामी लामो समयसम्म ब्रस गर्ने गल्ती गरिरहेका हुन्छौं। ब्रस गर्नुको अर्थ भनेको दाँतमा रहेको एवं अल्झिएको खानेकुरा सफा गर्नु हो। तर, हामी आवश्यक्ता भन्दा बढी समय ब्रस गर्छौ, जसले दाँतलाई नराम्रो असर गर्छ। कम्तीमा तीन मिनेटसम्म ब्रस गर्नु उपयुक्त हो।
३) खानापछि मात्रै ब्रस-धेरैजसोले बिहान उठ्नसाथ ब्रस गर्छन्। तर, गर्नुपर्ने चाहि के भने जब खाना खान्छौं, तब ब्रस गर्नुपर्छ। यसले गर्दा दाँतमा खानाको फोहोर जमेर बस्न पाउँदैन। खासगरी बिहान र बेलुकीको खाना पछि दुई पटक ब्रस गर्नु राम्रो हो।४) जथाभावी ब्रस राख्नु-ब्रसले सोझै मुखको सम्पर्कमा आउँने साधन हो। तर, हामी ब्रस गरेपछि त्यसलाई बाथरुम वा जथाभावी राख्छौं। यसले ब्रसमा ब्याक्टेरिया जम्मा हुन्छ। उक्त ब्याक्टेरिया सजिलै हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छन्।५) पटक-पटक ब्रस गर्नु-कतिले दाँत सफा राख्न पटक पटक ब्रस गर्छन्। यसले पनि दाँतलाई फाइदा गर्दैन। यसरी पटक पटक ब्रस गर्दा दाँतको क्याबिटीमा नराम्रो असर पर्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
हनिमुनमा छोरीसँगै गएकी आमाको ज्वाईसँग यस्तो हर्कत !
December 1, 2020 Khabar Pati
वनजंगलमा सजिलै पाइने, बनाउन सजिलो हुने र खादा स्वादिलो हुने निगुरोको १० फाईदा यस्ताछन् ।
May 23, 2021 May 23, 2021 goodmam
दमकमा मोटरसाईकल दु र्घ टनामा परि विष्ट दम्पत्तीको घटना स्थ लमै मृ त्यु July 28, 2021